Cabanga Njenge-Hacker! - Isazi Semalt Sichaza Indlela Yokuvikela Iwebhusayithi Yakho
Izindaba mayelana nokukhwabanisa kwewebhu ziphezu kwezindaba nsuku zonke. Izigidi zedatha ziphelaezandleni zabaduni abayekethisa idatha, beba imininingwane yamakhasimende kanye neminye imininingwane eyigugu eholela ekutheni ukwebiwa ngezinye izikhathi. Ikonanamanje kungaziwa abaningi ukuthi abahlukumezi bewebhu benza kanjani ukufinyelela okungagunyaziwe kwamakhompyutha abo.
uJack Miller, ochwepheshe i-Semalt ,uye waqondisa ulwazi olubaluleke kunazo zonke mayelana nokukhwabanisa ukuze uhlasele ukuhlaselwa.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi abahlaseli bewebhu bayazi ukwakhiwa kweisayithi ngaphezu kwabathuthukisi bewebhu. Bayaqonda kahle indlela yokudlulisa indlela yenethiwekhi evumela ukuthi abasebenzisi bathumele futhi bathole idathakusuka kumaseva ngokucela.
Ukwakhiwa kwezinhlelo namawebhsayithi kuthatha izidingo zabasebenzisi ukuthi yinikudinga ukuthumela nokuthola idatha. Abaduni bewebhu bayazi ukuthi abathuthukisi bewebhu abakha amawebhusayithi kubathengisi be-intanethi bawasizaukukhokha kwemikhiqizo ngemuva kokufakwa enqoleni yokuthenga. Lapho abathuthukisi bewebhu bezakhela izinhlelo, bahloswe ngamakhasimende abofuthi uhluleka ukucabangela ngezinsongo zokungena kwekhodi ngabaduni bewebhu.
Ngabe amaHackers asebenza kanjani?
Abahlaseli bewebhu bayaqonda ukuthi amasayithi asebenza ngezinhlelo ezicelayoulwazi futhi wenze ukuqinisekiswa ngaphambi kwenqubo ephumelelayo yokuthumela idatha-yokuthola. Idatha yokufaka engavumelekile ohlelweni, okuthiwa ukufaka okubiukuqinisekiswa, yilona ulwazi oluyisisekelo ngemuva kokukhwabanisa. Kuyenzeka uma idatha yokufaka ingafanani nokulindela ngokuya kweikhodi eklanyelwe yonjiniyela..Umphakathi wezingcingo ze-website usebenzisa izindlela eziningana zokunikeza ukungena okungavumelekile kuzinhlelo ezihlanganisa i-okulandela izindlela.
Eyaziwa nangokuthi ukuhlaselwa okuthulile, ukuhlela iphakethe kuhilela ukuhlaselwa kwedathaukuhamba. Umsebenzisi noma umphathi wewebhusayithi akaqapheli ukuhlaselwa ngesikhathi sokushintshaniswa kwedatha. Inqubo yokuthumela umsebenzisiisicelo sedatha esivela kumqondisi, abaduni bewebhu bangahlela idatha kumsebenzisi noma iseva ukuthola amalungelo angagunyaziwe. IphaketheUkuhlelwa kuthiwa yiNdoda ku-Attack Ephakathi.
Ngezinye izikhathi abahlaseli bewebhu bazuza ukufinyelela kuma-PC womsebenzisi ngokugcina okungalungileamakhodi kumaseva athembekile. Ikhodi enonya ihlasela abasebenzisi uma imiyalo imenywa ku-PC yomsebenzisi ngokuchofoza izixhumanisi nomailandelwe kumafayela. Okunye ukuhlaselwa okujwayelekile okungahambisani nomgwaqo kubandakanya ukufakwa kwesicelo se-site yesayithi kanye nokubhalwa kwesayithi.
Abahlaseli be-website bangaqhuba enye ye-Hacking ebhubhisa kakhulu ngokuhlasela aiseva ukuhlasela amasayithi. Abahlaseli bathola ukusengozini kwiseva futhi basebenzise ukugubha uhlelo futhi benze amalungelo okuphatha okunjalonjengokulayishwa kwefayela. Bangakwazi ukwenza njengezinkinga ezinzima ukweba ubunikazi kanye nokuhlukunyezwa kwewebhusayithi.
Ukuvikelwa kusuka Hackers Iwebhusayithi
Abathuthukisi beWebhusayithi badinga ukucabanga njengabaduni. Kufanele bacabange ngezindlelaamakhodi abo athathwe abaduni be-website ngenkathi besakha amasayithi. Abathuthukisi kumele benze amakhodi akhipha amakhodi omthombo ngokuphunyukaizinhlamvu ezikhethekile namakhodi engeziwe ukuze ugweme ukuthola imiyalo eyingozi kusuka kubaduni bewebhu. I-GET nemingcele yezinhlelokufanele kube nokuqapha okuqhubekayo.
Izibhamu zokufaka izicelo zewebhu zingabuye futhi ziqinisekise ukuphepha okuvela ekuhlaselweni kwabaduni be-website.I-firewall igcina ikhodi yohlelo ngokuyivikela ekusebenziseni ukuxhaphaza njengoba iphika ukufinyelela. Isicelo se-firewall esisekelwe efwini esabizwaI-Cloudric iyisicelo se-firewall sokuphepha kwewebhu okugcina.